Kedu ka m nwere ike isi malite ngwa ngwa n'ịntanetị? Ị ga-achọ Carl Henry Global njikere-mere azụmahịa !!
Anyị nwere ike ịnye gị azụmahịa nke ị nwere ike ịmalite ịntanetị dị ka obere oge ise, ihe niile ị ga-eme bụ ịmalite iziga ndị mmadụ na azụmahịa dị njikere.
Carl Henry Global ejikọtawo ụfọdụ n'ime ndị ọkachamara kachasị n'ịntanetị nwere ọtụtụ afọ na-enwe ọganihu n'ịntanetị nwere ike ịduzi gị site n'ọzọ iji kwalite azụmahịa nke aka gị n'ụzọ dị mfe, ị ga-enweta ọzụzụ na nduzi zuru ezu ka ị wee nye ya echela banyere enweghi ahụmahụ.
Mgbe ihe karịrị 40 afọ na azụmahịa m ozi bụ inyere ndị mmadụ aka inweta ihe mgbaru ọsọ ha na ntanetị ha n'oge kachasị anya.
Enwere otutu ozi dị taa na ọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ya mere, ozi m niile na-ebelata ruo na ọ ga-ekwe omume iji zipu ozi zuru oke ịchọrọ - Ihe ị chọrọ bụ mma abụghị ọtụtụ.
Enwekwara m ọtụtụ ụlọ ọrụ nke weebụsaịtị a iji nwee ike ịgụ ọdịnaya na asụsụ 88.
Ị ga-achọpụtakwa na agbajiri ọdịnaya ahụ n'ime ihe ọmụma dị mma maka ndị na-amalite, ndị ahịa na ndị ọrụ dị elu. Enwekwara m ike ịkekọrịta ozi iji nyere ndị chọrọ malite azụmahịa n'Ịntanet, weghachite usoro azụmahịa di n'uwa ma ọ bụ na- chekwaa azụmahịa n'Ịntanet nke ahụ anaghị arụ ọrụ zuru oke ma ọ bụ na-emezughị kpamkpam.
Enwekwara m nkwado atọ nke anyị na-akpọ "Gosi Gị" nke bụ ọzụzụ anyị n'ịntanetị, "Na gị" ebe anyị na-akwado gị n'ụzọ ụfọdụ na naanị na ụzọ ị chọrọ, na-ahapụ gị n'efu iji rụọ ọrụ ọ bụla ị na-enwe obi ụtọ na n'ikpeazụ "Maka gị" nke bụ ebe ị na-eji ọrụ anyị iji lekọta ọrụ niile achọrọ iji mepụta ọrụ azụmahịa gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ime ego online ozugbo mgbe ahụ enwere m azịza maka gị! Anyị na-ekekwa dị njikere ịme ahịa n'Ịntanet na ị nwere ike idetuo ma jiri ozugbo ma anyị ga nye gị ọzụzụ zuru oke na nduzi na otu esi eji Carl Henry Global mee ihe. Lee n'okpuru maka igodo nsoro na mpaghara ma ọ bụ ozi ị na-achọ ma ọ bụ jiri ụlọ ọrụ nyocha anyị dị ike, ekele gị!